Fandresena tao anaty alahelo ihany anefa ny azy ireo tamin’ity, satria vao ny omalin’io no nalevina teny Sabotsy Namehana ny mpilalao isan’ireo namiratra tao amin’izy ireo, i Mika Andrianasy. Nisalotra fehitanana mainty avokoa ireo mpilalao ho fisaonana ity mpanazatra, izay nampakatra azy ireo ho eo amin’ny diviziona voalohany, ity.
Nifanohotra tamin’izay kosa ny nanjo ny AS Adema omaly, izay lavon’ny Iarivo Football Club tamin’ny isa 1 no ho 0. Nivoaka ho mpandresy tamin’ny alalan’ny isa 3 no ho 1 ihany koa ny Japan Actuel’s nanoloana ny Dartline tamin’io andro io.
Hatreto aloha dia mbola ny ekipan’i Manjakaray no mitarika vonjimaika eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga ity. Samy nisaraka ady sahala 1 no ho 1 avokoa ny Cospn sy ny Ajesaia, ny Cosfa sy ny Tana Foramation FC tamin’ny alahady.